सूचना प्रविधि - लाङटाङ खबर डट कम
काठमाडौं: सामाजिक सञ्जालको रुपमा स्थापित युट्युब अब कानुनी दायरामा आउने भएको छ। सरकारले युट्युबलाई निगरानी गर्ने तयारी गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली एघारौं संशोधन गर्दै [...]
राष्ट्रिय परिचयपत्र भनेको नागरिकहरूको राष्ट्रिय पहिचान सहितको कानूनी दस्तावेज हो । यसमा नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण संग्रह गरिन्छ । नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय [...]
जेठ १५ काठमाडौं - आगामी साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै साउन १ गतेदेखि उक्त प्रविधि सञ्चालनमा आउने बताए । उनका अनुसार [...]
फागुन २५,लाङटाङखबर/काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हाल सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अुनसार २ करोड ४७ लाख ३५ हजार जनसङ्ख्या इन्टरनेटको पहुँचमा पुगेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको तथ्याङ्क अुनसार मङ्सिर मसान्तको तुलनामा पुस महिनामा ३ लाख ८८ [...]
लाङटाङखबर/काठमाडौं- वाग्मती प्रदेश यातायात सेवा कार्यालयले मंसिरबाट सवारी चालकको नयाँ अनुमति पत्र (स्मार्ट कार्ड) बितरण गर्ने भएको छ । मंसिर पहिलो हप्ताबाट वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाबाटै नियमित स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने तयारी रहेको भौतिक [...]
उत्तरगया गा.पा ले निकाल्यो क्वारेन्टाईन अनुगमनको प्रतिवेदन वास्तविकता यस्तो
रसुवा -उत्तरगया गाउँपालिकाले क्वारेटाईन अनुगमनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । क्वारेन्टाईनबारे आएको आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाले अनुगमन गरेको थियो ।
गाउँपालिका भित्र रहेको क्वारेन्टाईन अव्यवस्थित भएको [...]
एसईईको नतिजा सार्वजनिक ! रिजल्ट हेर्ने तरिका तल क्लिक गर्नुस !
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले अनलाइनखबरलाई [...]